Injini Yakanakisa Yekubhuka kune Yako Zororo Rendi Webhusaiti
Zvoga Kugadzira Kugadzira
Direct Dhavhidha Webhusaiti
3-D Yakachengeteka Zvinongedzo
Nzvimbo Dzakawanda PMS
Zvitsva Zvimiro Zviri Kuuya Nokukurumidza
Google Hotera Ads
Features » Kutsvaga Injini
Kutsvaga Injini inogona kubatanidzwa nyore nyore nevechitatu-bato mawebhusaiti kuona kuti vangangove vashanyi vane ruzivo rwekutsvaga Ichi chinoshamisa chiitiko chiri pano kutyaira kumusoro kwako kushandurwa uye kutora yako pfuma manejimendi kune inotevera nhanho.
Tinonzwisisa matambudziko ako ...
Sezvo online online zvinyorwa zvesaiti uye maOTA makomisheni anogona kunge akakwirira se20%, ayo anowanzoenzana kutenderedza 50% yemubhadharo wemaneja wekurendesa pazororo, iwo mabhuku akagamuchirwa kuburikidza nenzira idzi anodhura kwazvo. Sezvo muridzi webhizimusi renguva pfupi, hongu, iwe unoshuvira kuwedzera purofiti yako nekudzikisa iyo mari yakabhadharwa mumakomisheni. Nekudaro, hazvisi izvo zviri nyore nekuti iwe unofanirwa kuve uine maturusi kuitira kuti udaro!
Kunyangwe paine vanopa pekugara vanopa seti webhusaiti kuti vatore kunyoresa zvisina kunanga havana kubudirira zvakanyanya, sezvo mawebhusaiti avo asina mitengo yehupenyu uye kuwanikwa uye zvakavakirwa pane hwaro hwekubvunza. Panguva imwecheteyo, vashanyi avo vanoshandiswa kunzvimbo dzekubhuka ipapo ipapo vanotarisira zvakafanana chiitiko chemawebhusaiti ewavo.
Mazhinji software vanopa ayo anokupa iwe live mitengo uye kuwanikwa uchishandisa kubhuka injini kushaya zvimwe zvakakosha maficha. Dzimwe injini dzekubhuka dzine dhizaini inoita kunge yakanamatira muzana ramakore rapfuura. Vamwe havakwanise kubata akawanda-yeyuniti zvivakwa. Mazhinji eaya enjini ekubhuka haana mukana wekubvumidza muyenzi kutsvaga pakati pezvivakwa zororo rendi yekugamuchira iyo inogona kunge iine zvivakwa pamusoro peanopfuura rimwe guta. Uye zvinoita sekusagone kuwana mupi anobvumidza kwakakodzera kuteedzera kuburikidza neGoogle Analytics kana Google Tag Manager, maviri akakosha maturusi ebhizinesi rega rega.
Zeevou's Inotsvaga Injini Inobatsira Sei?
KuZeevou, tinonzwisisa kukosha kwekubhuka zvakananga, uye chinangwa chedu chakataurwa ndechekuunza Iyo Yakananga Kubhuku Chimurenga! Saka nekudaro, isu takazvipira kukupa iwe zvishandiso zviri nyore zvinogona kuita akakosha mabasa muindasitiri yekugamuchira vaeni. Semuenzaniso, kuvaka maturusi ayo anozogonesa varidzi vevaenzi veese saizi kuwedzera zvakanyanya chikamu chebhuku ravanowana pasina kukosha kwemubhadhari wepakati. Injini yedu yekubhuka chiratidzo chekuzvipira uku.
Injini yedu yekubhuka inodhonza mitezo mhenyu uye kuwanikwa, kungave kubva kune akapinda nemaoko kana kutumirwa kwatiri kuburikidza neyedu yemagetsi-mitengo kusangana vanobatana. Uyezve, isu tine nhau huru kune avo vanoshanda vanoshanda pasirese; yedu yekubhuka injini kunyange inotsigira yakawanda-mari set-kumusoro! Nekudaro, hapana chikonzero chekushushikana nezve kubata nemari dzakasiyana.
Zeevou Partners vanogona kumisikidza wedzera-wanda kutengesa zvimwe zvigadzirwa kana masevhisi uye kurongedza izvi sechikamu chehurongwa hweyero. Mauto anogona kusarudza kusundira chirongwa cheyero kungoita injini yekubhuka, kuti vape madhiri akasarudzika kana achienzaniswa neanopa maOTA. Zeevou inokutendera kuti umise kushambadza, uye shamwari makodhi evavhoti kushandiswa kuburikidza neinjini yemahara yemahara zvachose.
Pane zvakawanda zvakawanda kuZeevou's booking engine feature. Iwe unogona kusanganisa yedu yakananga yekubhuka injini ne Google Analytics kuitira kuteedzera traffic uye huwandu hwevanhu. Izvi zvinogona kubatsira mukunzwisisa kuri nani of yako inogona vatengi. Uyezve, kusangana kwedu ne Google Tag Manager inobvumira varidzi kuti vashandise iyo Zeevou yekubhuka injini yekutarisisa kuyerera kuburikidza newebhusaiti uye iwo mabhucha avanogashira. Izvi zvinonyanya kubatsira kana uchiedza kugadzirisa kudzoka kwako pane investment yePPC-Bhadhara Per Click- Google Ad mishandirapamwe.
Kuisa kubhuka kwakanyatsojeka. Zvese zvinoitwa nemuenzi kuwedzera zita ravo rekutanga, rekupedzisira zita, uye kero yeemail. Kana iwe uchida, iwe unogona zvakare kuvakumbira kuti vaendese yavo Nhare nhamba kuti vakwanise kuisa kubhuka. Kutapudza ruzivo rwakakumbirwa kubva kumuenzi uchinge uchiisa chengetedzo kunova nechokwadi chekuti iwe unokwanisa kutora iyo data yevakawanda vangangoita vashanyi sezvinobvira. Zeevou's 5-Nhanho Kubhuka Kusimbisa Maitiro inopa vashanyi kunzwa kwekubhuka pasina chero kunetsekana pamwe nekutarisira GDPR-inoenderana yekutengesa kubvumidzwa kuunganidza, kubhadhara, kuchengetedzeka mari, uye ID kuisirwa.
Kune avo vasingade kushandisa zvemahara uye zvakakwana yakananga kubhuka webhusaiti inopihwa naZeevou, yedu yekubhuka injini inogona kuve nyore kusanganiswa neyechitatu-bato mawebhusaiti. Chikwata chedu paZeevou chakagadzira WordPress Widget, pamwe neIrame iyo inogona kuiswa mune mamwe mawebhusaiti, kusanganisira iwo anopiwa ne Wix. Izvi zvinodzosera vaenzi musono kune iyo Zeevou booking injini uye inobvumira vaenzi kuisa kubhuka nekungodzvanya mashoma.
Maitiro ekukudza bhizinesi rako uchishandisa Zeevou's booking engine ficha haina kurwadziwa. Na kukumbira demo remahara, iwe unowana mukana wekuongorora zvimwe zvinhu iyo Zeevou inopa uye kubatsira bhizinesi rako kuwana nzvimbo yaro mumusika uyu wemakwikwi. Usakanganwa kuti yedu sangano rekutsigira ari pano kuti akubatsire kana iwe uine chero mibvunzo.
← Yapfuura Feature
Inotevera Feature →
Yakagadzirira Kubatana Iyo
Direct Dhavhidha Shanduko?
Tarisa Vhidhiyo yedu
Yakasimba Chiteshi Maneja
unoda kuramba uri muchiuno?
Copyright © 2021 Zeevou | Zeevou Limited yakanyoreswa pa1st Floor Kensington Chambers, 46/50 Kensington Pl, St Helier JE4 0ZE, Jersey, Channel Islands ine nhamba yakanyoreswa 132351. Tinodada nekushandira Partner Hosts pasirese.
Iyi webhusaiti inochengeta makuki pakombuta yako.